Madaxweynaha horyaalka La Liga oo war wanaagsan ee la xiriira xilli ciyaareedka u sheegay Taageerayaasha – Gool FM
Dajiye May 25, 2020
(Spain) 25 Maajo 2020. Madaxweynaha La Liga ee Javier Tebas ayaa u sheegay taageerayaasha war wanaagsan ee ku saabsan dib u soo laabashada xilli ciyaareedka, kaddib markii muddo dheer loo joojiyay sababa la xiriira COVID-19.
Javier Tebas ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in qof walba uu ka shaqeynayo soo laabashada tartanka horyaalka La Liga ee dalka Spain 11-ka bisha June ee soo socota, gaar ahaan marka ay tahay 10:00 pm, waxaana tartanka markale lagu bilaabi doonaa kulanka u dhexeeya kooxaha Real Betis iyo Seville.
Haddaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Madaxweynaha La Liga ee Javier Tebas, wuxuuna yiri:
“Waxaa suurtogal ah in kulanka ugu horreeya la ciyaaro 11-ka bisha June, kaasoo noqon doona kulan aan caadi aheyn, isla markaana lagu sharfi doono dhamaan dadka geeriyooday”.
“Waxaan rajeynayaa in taarikhdaan la dhaqan geli doono, waxaana jeclaan laheyn in kulanka Seville derby uu noqdo 10 habeennimo”.
“Tababarka guud waa ujeedkeena hadda, haddii aan tan ku guuleysano, waxaan soo bandhigi doonnaa taariikhda soo laabashada horyaalnimada, waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo Madaxweynaha Spain, wuu naga yaabiyay, wayna cadaatay in kubadda cagta ay aad muhiim ugu tahay wadankan”.
“Fikradeenu waa inaan awoodno inaan diyaarinno jadwalka kulamada afarta maalmood ee ugu horreeya toddobaadkaas”.